यस Radeon HD 7950: परीक्षण, समीक्षा र प्रतिक्रिया
AMD कम्पनी - भिडियो कार्ड मा विश्व बजार नेताहरूले बीचमा। यो ब्रान्ड फरक मूल्य खण्डहरूमा मा एडेप्टर विनिर्माण। AMD देखि लोकप्रिय प्रिमियम ग्राफिक्स कार्ड को मोडेल बीच - Radeon HD 7950. यो उपकरण एकल-प्रोसेसर समाधान को श्रेणी मा पतन छ, तथापि, यो अक्सर एकदम उच्च रूपमा पनि धेरै दोहरी-प्रोसेसर उपकरणहरू को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध मानिन्छ। के स्रोतहरू HD 7950 यन्त्र खण्ड मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ?
उपकरण बारेमा आधारभूत जानकारी
ग्राफिक्स कार्ड AMD Radeon HD 7950 - यन्त्र ग्राफिक्स प्रोसेसर टाहिटी, 4.31 अर्ब ट्रांजस्टरहरुको हुन्छन् र 28 एनएम प्रक्रिया प्रविधि भित्र उत्पादन जो संग सुसज्जित छ। ग्राफिक्स कार्ड को संरचना मा एक कम्प्युटिङ एकाइ 28 छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक -4सदिश घटक, र तिनीहरूले बारी मा, 16 shaders संग। एक कोर एक ग्राफिकल प्रोसेसर 1792 छ गणना गर्न सक्छन्। मा भिडियो कार्ड Radeon HD 7950 स्थापित मुख्य चिप को आवृत्ति 800 मेगाहर्ट्ज छ। शिखर प्रदर्शन प्रोसेसर 2.87 Tflops छ। मा वर्तमान ग्राफिक्सएडप्टर 8 ब्लक रेस्ट्राइजेसनलाई समावेश गर्छ, अनुमति devaysu रेखापुंज सञ्चालन 1 चक्र लागि 32 लागू। यी नियन्त्रक664-बिट प्रकार जोडिएको छ। भिडियो राम Radeon HD 7950 - 3GB, स्मृति मोड्युलहरू 1250 मेगाहर्ट्ज को एक आवृत्ति मा सञ्चालन। राम बस एडप्टर - 384-बिट।
tessellation मामलामा कसरी फलदायी उपकरण अध्ययन गरेर। अन्य सेटिङहरू प्रदर्शन भिडियो कार्ड संग correlated छ - यो जो, विशेष, विचार अन्तर्गत कार्य असक्षम को विकल्प छ यसको मापन benchmarks प्रकार HAWX2को अधिकतम प्रयोग, लागि भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। को एडप्टर गति सक्षम tessellation सबैभन्दा उद्देश्य मूल्यांकन संभवतः मुख्यतया NVIDIA देखि प्रतिद्वन्द्वी समाधान देखाउँछ कि परिणाम संग परीक्षण मा संवाददाता आंकडा तुलना गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा निष्क्रिय गरिएको छ जब प्रदर्शन tessellation लगभग 82% को माप भन्दा उच्च सक्षम को परीक्षण devaysa Radeon HD 7950 परिणाम अनुसार देखाए। चिन्ह लगाइयो सूचक - उच्च परीक्षण गर्दा प्रतिस्पर्धा कार्ड को गति भन्दा - NVIDIA, द्वारा wherein2मोड मा - मा र बन्द एक tessellation संग।
यो कम्पनी AMD निर्मित devaysakh मा लागि अडियो प्रसारण प्रविधि स्ट्रिम परिचय पहिलो ब्रान्ड मानिन्छ छ उल्लेख गर्न सकिन्छ उच्च परिभाषा जस्तै Dolby साँचो HD प्रारूप मा, अडिट विशेष, र डीटीएस-HD मास्टर अडियो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मल्टिमिडिया फाइलहरू खेल्न प्रयोग सफ्टवेयर, लाइन मा एक संकुचित ढाँचा देखि परिवर्तित ध्वनि प्रदान र भएको माधुर्य HDMI मार्फत प्ले छ उपकरणमा एउटा संकेत प्रसारित गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा उल्लेखनीय सुविधाहरू कार्ड ध्वनि को मामला मा AMD Radeon HD 7950 - फरक अडियो प्रवाहको साथ प्लेब्याक संभावना।
हेरिएको ग्राफिक्स कार्ड राम्रो overclocks। तर, विभिन्न ब्रान्डहरु उत्पादित उपकरणहरू को अनुकूलता, यो विकल्प फरक हुन सक्छ। त्यसैले, बजार मा ग्राफिक्स कार्ड आपूर्ति गर्ने मुख्य कम्पनीहरु - नीलम, ASUS, Gigabyte, XFX, Powercolor। Radeon HD 7950, ओभरक्लकिङ संग इष्टतम अनुकूलता धेरै आईटी-विशेषज्ञहरु छ जो, XFX ब्रान्ड विनिर्माण। यो यस परिमार्जन मा उपकरण विशेष ठंडा प्रणाली संग सुसज्जित छ भन्ने तथ्यलाई गर्न धेरै हदसम्म कारण छ।
त्यसैले, यसको सट्टा भिडियो कार्ड को किनारा मा, विचार devayse अन्तर्गत अन्य मोडेल रूपमा राखिएको एक प्रशंसक को कूलर2सक्रिय भयो। जबकि एल्यूमीनियम HEATSINK गर्मी हटाउँछ तिनीहरूले सीधा ग्राफिक्स प्रोसेसर माथि हावा को क्रस-प्रवाह गठन। एयर को रियर प्यानल मार्फत उपकरण देखि discharged छ। यसरी गरम हावा को एक महत्वपूर्ण राशि कम्प्युटर आवास भित्र छरिएका। केही आईटी-विशेषज्ञहरु, साथै द्वारा उल्लेख रूपमा, वास्तव मा, को Radeon 7950 ग्राफिक्स कार्ड HD यस छलफल परिमार्जन को ब्रान्ड निर्माता, यो ठंडा प्रणाली ग्राफिक एडेप्टरको मानक संस्करण स्थापित छ कि एक भन्दा धेरै कम हल्ला स्तर छ।
यो XFX बाट उपकरण पनि प्रदर्शन को मामला मा विभिन्न विशेषताहरु छ उल्लेख गर्न सकिन्छ। GPU कोर कार्ड को एक परिमार्जन मा स्थापना भएको छ, यो 900 मेगाहर्ट्ज, स्मृति मोड्युलहरू एक आवृत्ति मा संचालित - 1375 मेगाहर्ट्ज मा। ग्राफिक्स कार्ड ओभरक्लकिङ लागि अधिकतम उपयोगिता - AMD अत्यधिक ~। यो उत्तिकै इष्टतम सिद्धान्त मा, यन्त्रको कुनै पनि संस्करणको लागि छ - कि, उदाहरणका लागि, नीलम Radeon HD 7950 वा, उदाहरणका लागि, ASUS यन्त्र। GPU को र 1450 को मामला मा बारेमा 1025 मेगाहर्ट्ज सम्म - - राम मोड्युलहरू को भाग मा भिडियो XFX को संशोधन आदर, यो राख्ने स्थिरता कि हुनेछ proviso संग फैलाने गर्न सम्भव छ।
Radeon HD 7970. पूर्ण लोड मा उपकरणको तापमान 75 डिग्री छ - आईटी-विशेषज्ञहरु द्वारा आयोजित परीक्षण द्वारा देखाइएको, overclocked यन्त्र, noticeably छिटो चल्छ नै दायरामा पनि प्रमुख ग्राफिक्स कार्ड। भिडियो कार्ड XFX को हल्ला स्तर, - बारे 37.3 dB।
पीसी इष्टतम कन्फिगरेसन
यस Radeon HD 7950 सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन देखाउन सक्षम हुनेछ मात्र गति को आवश्यक स्तर संग कम्प्युटर उपकरण हार्डवेयर घटक। सिफारिस पीसी कन्फिगरेसन यो मापदण्ड सन्तुष्ट समावेश गर्नेछ:
- प्रोसेसर इन्टेल कोर स्तर i7, 15 एमबी को मात्रा मा एक क्यास3बारे4GHz र एक घडी आवृत्ति मा चलिरहेको समर्थन हाइपर-थ्रेडिङ प्रौद्योगिकी;
- Motherboard स्तर Gigabyte X79-UD5, सुसज्जित Chipset X79 एक्सप्रेस, साथै संस्करण F8 गर्न BIOS भएको;
- 16 जीबी को राम मोड्युलहरू DDR3-1600 मात्रा प्रकार;
- SATA प्रविधि मा हार्ड ड्राइभ, बारे6जीबी / को गति को लागि डाटा विनिमय सक्षम।
पुरस्कार-विन्यास पीसी लागि इष्टतम अपरेटिङ सिस्टम - Windows764-बिट संस्करण। माथि उल्लेख हार्डवेयर घटक को आधार मा संकलित मंच, एक उच्च प्रदर्शन भिडियो कार्ड वस्तुतः कुनै पनि परिमार्जन, उदाहरणका लागि, Gigabyte उपकरणबाट प्रदान गर्न, ग्राफिक्सएडप्टर ASUS Radeon HD 7950 यसलाई हुन सक्छ, वा।
परीक्षण मा ग्राफिक्स प्रदर्शन
हामी अब परीक्षण प्रतिवेदन उपकरणको परिणाम अध्ययन। 3DMark 11 परीक्षणको परिणाम स्वरूप, विशेष मा, सफ्टवेयर ग्राफिक्स कार्ड को माध्यम द्वारा NVIDIA देखि एक प्रतिस्पर्धा समाधान को अगाडी - - ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 580. तर, कमसल दोहरी-प्रोसेसर Radeon HD 6990 devaysu ग्राफिक्स कार्ड को गति नाप्ने लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम बीच।
डबल सटीक - परीक्षण मा, Sandra 2012 विशेष, 32-बिट अस्थायी बिन्दु र 64-बिट को मोड मा प्रदर्शन भिडियो कार्ड मापन गर्न, सम्भव छ। ग्राफिक्स कार्ड GTX 580, तर यसको लाइन को अग्रणी मोडेल गर्न कमसल, साथै दोहोरो-प्रोसेसर devaysu HD 6990 - संवाददाता परीक्षण को रूपरेखा भित्र Radeon HD 7950 राम्रो NVIDIA देखि प्रतिस्पर्धा समाधान को अगाडि छ।
छलफल अर्को लोकप्रिय परीक्षण कार्यक्रम ग्राफिक्स प्रोसेसर र मेमोरी मोड्युलहरू बीच ब्यान्डविथ डाटा प्रसारण च्यानल को मापन समावेश छ। HD 7950 ग्राफिक्स कार्ड यो सूचकांक दोहरी-प्रोसेसर समाधान गर्न predictably कमसल।
Sandra परीक्षण कार्यक्रममा दावी अर्को ग्राफिक्स प्रोसेसर र PCI-ई इन्टरफेस बीच संचार गति को मापन समावेश छ। यो उच्च गतिको मानक समर्थन गर्ने कार्डहरू नेतृत्व - PCI एक्सप्रेस संस्करण 3.0। ती, विशेष मा, ग्राफिक्स एडेप्टर शासकहरू, जो कार्ड Radeon HD 7950. उपयुक्त सुप डाटा दायरा9Gbytes / सेकेन्ड मा गति मा संचार भित्र प्रसारित हुन सक्छ गर्न। बारी मा, विरासत PCI इन्टरफेस6जीबी / को गति को क्रम मा छन्।
परीक्षण MediaEspresso मा नेत्रहीन तपाईं प्रदर्शन एडेप्टर मा प्रवेग गुणस्तर जाँच्न सक्नुहुन्छ। आईटी-विशेषज्ञहरु, केही अवस्थामा, उपयुक्त सफ्टवेयर छैन AMD देखि ग्राफिक्स कार्ड संग पनि इष्टतम अनुकूलता प्रदान गर्दछ। त्यसैले, तपाईं उपकरणहरू को महत्वपूर्ण कार्य केही असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। को भिडियो कार्ड HD 7950 जारी को समयमा भनेर याद गर्न उपयोगी छ भन्ने अर्को पक्ष, AMD भिडियो कोडेक इन्जिन प्रविधि भित्र हार्डवेयर प्रवेग लागि पूर्ण समर्थन कार्यान्वयन गरेको छैन। यो परीक्षण उपकरण प्रदर्शन दिइएको कार्यक्रममा संग जडान मा भद्र दर प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
बारी मा, OpenCL गति HD 7950 ग्राफिक्सएडप्टर को मोड मा एकदम उच्च तहमा निश्चित छ। यसरी, परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत LuxMark भिडियो कार्ड प्रदर्शन 1 सेकेन्ड प्रति नमूनाहरू संख्या मा मापन गरिएको छ। को संकेतक अनुसार छलफल ग्राफिक एडप्टर धेरै प्रतिस्पर्धी देखिन्छ।
धेरै आईटी-विशेषज्ञहरु को "फलाम" को प्रदर्शन मापन गर्न रुचि खेल र कृत्रिम benchmarks र वास्तविक-संसारमा आवेदन छैन। उदाहरणका लागि, तपाईं भिडियो सम्पादक को कोटीमा पर्छ जो vReveal को एक कार्यक्रम, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ devaysa त्यसैगरि मूल्यांकन गति गर्न। यो सफ्टवेयर मार्फत, तपाईं को Radeon HD 7950 हार्डवेयर प्रवेग सुविधा भिडियो संसाधन एल्गोरिदम को प्रदर्शन को दक्षता कसरी असर गर्छ पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
केही आईटी-विशेषज्ञहरु, उदाहरणका लागि, उच्च संकल्प र गुणस्तर अनुकूलन सुविधा, vReveal द्वारा समर्थित को साथ आवेदन भिडियो प्लेब्याक मार्फत प्रदर्शन devaysa मापन गर्न खोजे। HD 7950 ग्राफिक्सएडप्टर कार्य परीक्षण द्वारा देखाइएको सफलतापूर्वक ह्यान्डल छ - साथै यसको प्रत्यक्ष प्रतियोगिहरु र AMD ब्रान्ड देखि कार्यक्षमता र क्षमता समाधान त्यस्तै। तथापि, परीक्षण उपकरणहरू को प्रदर्शन प्रोसेसर मा लोड को पक्ष मा dissimilar थिए। यो NVIDIA देखि समाधान प्रतिस्पर्धा संग मामला छ भन्दा AMD देखि ग्राफिक्स कार्ड पीसी गरेको मुख्य चिप गणनाको संसाधन को एक सानो मात्रा को संलग्नता आवश्यक बाहिर गरियो।
खेल मा ग्राफिक्स प्रदर्शन
खेल Battlefield3मा, Radeon HD 7950 पनि उपकरण GTX 580 NVIDIA देखि भन्दा छिटो, र विभिन्न रिजोल्युसन छ। यो खेल मा चौरसाई बिना साथै कार्यक्रममा 3DMark 11, नेतृत्व उपकरण HD 6990. ग्राफिक्स कार्ड को प्रदर्शन परीक्षण को लागि तर मोडमा उपयुक्त विकल्प सक्रिय गर्न भने, यन्त्रको उच्च गति NVIDIA देखि GeForce GTX 590 देखाउँछ।
Crysis2मा प्रश्न मा उपकरण सबैभन्दा उल्लेखनीय परिणाम हो देखाउँछ। ग्राफिक्स कार्ड HD 6950. विशेषज्ञहरु नयाँ लाइन को उपकरण वास्तुकला मा जो ग्राफिक्स कार्ड AMD Radeon HD 7950, DirectX9मानक संग सबै भन्दा अधिकतम अनुकूलता छैन भनेर प्रविधिहरू कार्यान्वयन गर्न भन्ने तथ्यलाई यस विशेषता - विशेष मा, यो अघिल्लो मोडेल गर्न कमसल छ।
खेल AMD देखि Skyrim ग्राफिक्स कार्ड - नेताहरू बीच। विशेष मा, त्यो NVIDIA देखि समाधान प्रतिस्पर्धा को अगाडि छ। बारी मा, डाटा सुप माटो3मा, को रूपरेखा भित्र खेलको विकासमा भन्ने तथ्यलाई बावजुद स्वाप छन् AMD गेमिङ विकसित लिन्छ ब्रान्ड ग्राफिक्स कार्ड निर्माता सहभागिता Radeon। भिडियो कार्डहरू पर्छ, जब खेल माटो3मा परीक्षण प्रदर्शन जित्छ जो दायरा भित्र तथापि HD 6950., को प्रमुख उपकरण - को devaysa HD 7950 गति मा एक चिह्नित वृद्धि Radeon खेल अवलोकन अघिल्लो लेखमा मोडेल तुलनामा।
Warcraft को विश्व मा ग्राफिक्स कार्ड को गति परीक्षण सञ्चालन: Cataclysm उपकरण HD 7950 प्रतिस्पर्धा समाधान, NVIDIA उत्पादित छोटो पतन छ भन्ने संकेत गर्छ। उपकरणको खेल मेट्रो 2033 प्रदर्शन GTX 580 परीक्षण समयमा रेकर्ड भन्दा उच्च एक स्तरमा छ, तर पुरानो मोडेल लाइन छ जो त्यो भन्दा कम। एकै समयमा, आईटी-विशेषज्ञहरु द्वारा उल्लेख रूपमा, गेमप्लेको समयमा सान्त्वना उलझाने HD 7950 ग्राफिक्स कार्ड पनि स्क्रिन संकल्प र विस्तार तस्बिरहरू को उच्चतम संकेतक मा पर्याप्त स्तरमा प्रदान गरिएको छ।
यस Radeon HD 7950 कति छ? एक ठूलो हदसम्म विक्रेता निर्भर गर्न उपकरणको मूल्य अहिले छ। 2013 मा विषय ग्राफिक कार्ड बजार देखि फिर्ता लिया थियो भन्ने तथ्यलाई कारण, यो आधुनिक खुद्रा चेन को समतल मा फेला पार्न गाह्रो छ। तपाईं संभावना यो विज्ञापन वा अनलाइन लिलामी साइट मा किन्न हुनेछ। प्रासंगिक निर्देशिका Radeon HD 7950 पाउन सक्नुहुन्छ भने, devaysa मूल्य बारे 11 हजार। Rubles हुनेछ। तपाईं पनि ढुवानी लागि भुक्तानी गर्न सक्छ। ग्राफिक्स कार्ड AMD Radeon HD 7950 को अधिग्रहण अर्को पक्ष: उपकरणको मूल्य डलर मा धेरै हदसम्म निर्भर गर्नेछ। वस्तुतः प्रत्याभूति - अवस्थामा सामान विदेशी पसलहरूमा मा किनेको हो जहाँ मा। तथापि, ग्राफिक्स को विभिन्न संशोधनहरू बीच विभिन्नता - Gigabyte Radeon HD 7950 वा, उदाहरणका लागि, ASUS देखि devaysa संस्करण, सानो हुनेछ।
विषयगत पोर्टलमा फेला समीक्षा आधारित अब हामी छलफल ग्राफिक्सएडप्टर राय अध्ययन। ती निम्न व्यापक विभाग मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
- सामान्य मोडमा उपकरणको प्रदर्शन विषयमा राय;
- समीक्षा को परिणाम मा ओभरक्लकिङ ;
- आफ्नो काम को स्थिरता को मामला मा ग्राफिक्स को मूल्यांकन प्रतिबिम्बित समीक्षा।
हामीलाई विस्तार तिनीहरूलाई अध्ययन गरौं।
सामान्य रूपमा devaysa काम: समीक्षा
जो सामान्य मोडमा ग्राफिक्स कार्ड, अर्थात् प्रवेग बिना को प्रदर्शन प्रतिबिम्बित समीक्षा, प्रयोगकर्ता फरक मोड मा स्क्रिनमा र संकल्प सेटिङहरू एक विस्तृत दायरामा उच्च गुणस्तरको तस्बिर प्रदर्शन गर्न ग्राफिक्स कार्ड को क्षमता रिपोर्ट गरेका छन्। भिडियो कार्ड Radeon, यसरी निगरानी वा प्रणाली मानकहरु को विशेषताहरु बिना काम को सान्त्वना को नै उच्च स्तर प्रदान गर्दछ।
एक भिडियो कार्ड ओभरक्लकिङ: समीक्षा
समीक्षा, को प्रवेग मोडमा प्रदर्शन ग्राफिक्सएडप्टर एक मूल्यांकन झल्काउँछ पनि एकदम सकारात्मक छ। सदस्य, सिद्धान्त मा, हुनत यो मामला मा धेरै विशिष्ट परिमार्जनहरू निर्भर यन्त्र, हल्ला छ कल छैन। खेतमा एक अवैतनिक प्रयोग रूपमा मुख्य ओभरक्लकिङ ग्राफिक्स कार्ड भन्न - को ग्राफिक्सएडप्टर stably काम गर्दछ जसमा सेटिङ फेला पार्न। वास्तवमा, सञ्चालनको यस पक्षलाई समीक्षा छुट्टै वर्गमा प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
devaysa स्थिरता को समीक्षा
साँच्चै, यो पनि छ कि हुन्छ भन्दा शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड जम्छ, सञ्चालन प्रणाली मा असफलता कारण पनि विकृति संग छवि प्रक्रियाहरु। लागि ग्राफिक्स कार्ड Radeon HD 7950, प्रयोगकर्ता र आईटी-विशेषज्ञहरु अनुसार, यस्तो विशेषताहरु छैन peculiar काम हो। भिडियो कार्ड सिस्टम असफल कारण बिना stably संचालित। यो ओएस उपकरण लागि नवीनतम चालक स्थापित थियो, यो मामला मा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम छ। उपयुक्त सफ्टवेयर उपलब्धता - कुनै पनि उपकरण को स्थिरता सुनिश्चित लागि मुख्य अवस्था बीचमा। विशेष गरी - ग्राफिक्स कार्ड, आफ्नो पीसी को प्रदर्शन निर्धारण गर्ने प्रमुख हार्डवेयर घटक मध्ये एक छ जो।
घरमा आफ्नो कम्प्युटर सफाई
Logoneurosis: यो के हो, को कारण, उपचार
नागरिक व्यवस्था। उमेर योग्यता
एक hemangioma के हो र यो कस्तो स्वास्थ्य गर्न खतरनाक छ?
"Peppa सुँगुर" - बच्चाहरु को लागि केक
म्याट्रिक्स BKG: निर्माण र विश्लेषणको उदाहरण "एक्सेल" र "वचन" मा